Madaxweynaha Uhurru Kenyatta iyo Raiisel wasaare Abiy Ahmed ee Ethiopia waxay la hadlayaan dadka reer Mooyaale ee jooga xadka ay wadaagaan Kenya bilowga booqashada rasmiga ah ee hogaamiyaha Ethiopia ee Kenya. | ToggaHerer
← Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta qaabilay kooxda kubbadda cagta ee xaga maqalka ama dhegoolayaasha oo kasoo jeedda gobolka Awdal, kuwaas oo kusoo guulaystay tartan ka qabsoomay dalka aynnu deriska nahay ee Jabuuti.
Mahadnaq Ku Socda Hormuudka Kulliyadda Sharciga ee ALPHA University. W/Q: Maxamed A. Elmi →
Madaxweynaha Uhurru Kenyatta iyo Raiisel wasaare Abiy Ahmed ee Ethiopia waxay la hadlayaan dadka reer Mooyaale ee jooga xadka ay wadaagaan Kenya bilowga booqashada rasmiga ah ee hogaamiyaha Ethiopia ee Kenya.
Published on December 9, 2020 by Maxamedyare
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kaabayaasha cusub ee xuduudaha ay ka caawin doonaan sare u qaadida isdhexgalka gobolka iyo ganacsiga iyadoo loo marayo isdhexgalka dadka iyo dadka.
Isla mar ahaantaana, labada hoggaamiye waxay u digeen shaqsiyaadka hurinaya colaadaha wadaagga ah ee gobolka iyagoo sheegay in labada mas’uul ee Kenya iyo Itoobiya aysan ka laaban doonin dadaalkooda wadajirka ah ee lagu xaqiijinayo nabadda iyo xasilloonida soohdinta guud.
Xigasho: State House Kenya